भारतीय सीमामा नयाँ पिलर गाड्दा नेपाली भूमि मिचियाे, स्थानीय भन्छन् : तिरो तिरिरहेको जग्गा एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ ? त्यहाँको पछिल्लो अवस्था यस्तो छ (पुरा विवरण हेर्नुहोस्) – पुरा पढ्नुहोस्……
भारतीय सीमामा नयाँ पिलर गाड्दा नेपाली भूमि मिचियाे, स्थानीय भन्छन् : तिरो तिरिरहेको जग्गा एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ ? त्यहाँको पछिल्लो अवस्था यस्तो छ (पुरा विवरण हेर्नुहोस्)
वीरगञ्ज । नेपाल – भारत सिमानामा पिलर निर्माण र मर्मतका क्रममा नेपाली सीमा मिचिएको पाइएको छ । नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा गरिरहेको हराएका र क्षतिग्रस्त पिलरको निर्माण र मर्मतको क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १ छपकैया क्षेत्रमा मात्रै १२ जना भन्दा बढी स्थानीयको झण्डै ५० विघा जमिन मिचिएको पाइएको छ ।
स्थानीय नेमी साह कानु र असर्फी साह कानुको नाममा रहेको जग्गाको केही भाग पनि भारततर्फ पर्ने भएको छ । जग्गामा पिलर गाड्न खाल्डो खनेको जानकारी पाएपछि विरोध जनाएको नेमीका छोरा बद्रीले बताए ।
‘हामीलाई थाहै नदिइकन, हाम्रो नम्बरी जग्गामा आएर पिलर गाड्न खाल्डो खनेका रहेछन्’ उनले भने, ‘पुरानो पिलर सिर्सिया नदी पारी छ, तर नयाँ पिलर नदी वारी ल्याइएको छ ।
हामीले जग्गाको कर तिरिरहेका छौं, एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ ?’ नयाँ पिलर गाड्न लागेको क्षेत्रमा हजुरबुवाबाट बाबुको नाममा नामसारी भएको कित्ता नं ६५, ५४ र ५२ को नम्बरी जग्गा रहेको उनले बताए ।
तिरो तिरेर वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतको हुनै नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘उताको प्रहरी उतै बस्छन्, यताको प्रहरी यतै बस्छन् ।
नदी वारी पारी गर्दा बुट भिज्छ भन्ने चिन्ताले नेपालको जमिन भारततर्फ परिरहेको छ’ स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरीले भने ‘वर्षेनी तिरो तिरेर भोग चलन गरेको जग्गा कसरी भारतमा पर्छ ? भारतकै हो भने राज्यले हामीलाई कसरी दियो ?’
उनले जग्गा भारतकै हो भनेर नेपाली अधिकारीहरु भन्छन् भने आफूहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । ‘जग्गा भारतकै हो भने हामीलाई किन लालपुर्जा दिइयो ? त्यसको मुआब्जा पाउनुपर्छ ।’ स्थानीयले तत्काल पिलर निर्माणको काम रोकेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
पत्रसमेत बुझ्न नमानेको गुनासाे
पिलर निर्माण रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र लिएर जाँदा नेपाल – भारत सीमा नापी टोलीको कार्यालयले पत्र समेत बुझ्न नमानेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
पुस ३० गते वडा कार्यालयले दिएको पत्र र आफूले दिएको निवेदन प्रशासनमा दर्ता गराएको र सोही दिन प्रशासनले नापी टोलीको कार्यालयलाई पत्र पठाए पनि बुझ्न नमानेको जग्गाधनी कोइरीले बताए ।
वडा कार्यालयले मुल पिलर नं ३९१ सुन्दरपुर र ३९२ भकुवा बहृमस्थानदेखि रामजानकी मन्दिरसम्मको नयाँ पिलरहरु नेपालको भू-भागमा पर्ने देखिएकोले तत्काल काम रोकी नेपालको भूभाग छुट्ट्याएर पिलर गाड्न अनुरोध गरेको छ ।
नेपाली अधिकारी भन्छन् – कुराे नबुझेर समस्या
नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका अधिकारीहरुले भने स्थानीयले कुरा नबुझेका कारण समस्या भएको बताएका छन् । नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका टिम लिडर एवं प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले स्थानीयले प्राविधिक कुराहरु नबुझेका कारण पिलर निर्माणको क्रममा समस्या देखिएको बताए । ‘हामीसँग प्रविधि छ, त्यही प्रविधिको प्रयोग गरेर नाप्छौं ।
त्यसमा एक इन्च पनि जमिन तलमाथि हुँदैन’ उनले भने, ‘नेपाल भारतबीच १८४० मा भएको सुगौली सन्धिकै आधारमा अहिले पिलर गाड्ने काम भइरहेको छ । त्यतिखेर सिर्सिया नदी जहाँ थियो, अहिले त्यहाँ छैन । नदीले धार परिवर्तन गरेर बनेका पर्ती जग्गाहरु पनि नापेर व्यक्तिहरुलाई दिइएको छ । त्यसैले गर्दा समस्या भएको हो ।’
तपाईले कसैको घरमा जाँदा अथवा पसलमा जाँदा झिंगा धपाउन प्लाष्टिकमा पानी भरेर झुन्ड्याईएको देख्नु भएको छ ? पक्कै देखेको हुनुपर्छ किनकी यो झिंगा भगाउने लोकप्रिय तरिका हो ।
पानीले भरिएको प्लास्टिकको पोका देखेर झिंगा कसरी भाग्छ ? भन्ने धेरैको मनमा लागेको हुनुपर्छ । यदी तपाइको मनमा पनि त्यस्तै लागेको छ भने यो सामग्री तपाईका लागि खुराक बन्ने छ ।- फ्रीनेपालीन्युजबाट |
Prevभारतलाई लाग्यो अहिले सम्मकै ठुलो धक्का : चीनका ६ बन्दरगाह प्रयोग गर्न प्रस्ताव, चीनले दियो नेपालको लागि अर्को ठुलो मौका (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
Nextनुहाएपछि हात खुट्टाको छाला किन चाउरी पर्छ ?यसले के असर गर्ला ? यस्तो छ कारण पढेर सेयर गरौं
ओलीको सरकारले गर्ने यी खाकाहरुले आत्तिए काँग्रेसका शिर्ष नेताहरु नै !
अन्तरबार्तामै यसरि भ’क्कानिन् आस्था राउत, एयरपोर्टको घ’टनालाइ सम्झिदै यसो भनिन्..(भिʼडियो सहित)
भारतले जबर्जस्ति बनाएको स्तम्भ सशस्त्र प्रहरीले भत्कायो (बिबरण सहित हेरी सेयर गरौं)